Ọnwụ ▷ verchọpụta ọnlaịnụ ▷ ➡️
Bibie ihe ochie iji nye ohere maka nke ọhụrụ.
Ihe pụtara kaadị tarot «Ọnwụ»
Akwụkwọ ozi ọnwụ abụghị maka ọnwụ nkịtị nke mmadụ ọ bụla. Mee na-anọchi anya ọnwụ ihe ọzọ, dị ka ọrụ, atụmatụ, ma ọ bụ mmekọrịta. Kaadị a na-egosiputa oge owuwe ihe ubi, nke skeleton owuwe ihe ubi gosipụtara na ọkwa ochie.
Ọ bụrụ na egbuteghị mkpụrụ osisi oge ọkọchị, ha na-efu n'ime oge oyi, ma ndị mmadụ anaghị eri. Dị ka scythe na-egbutu ụdọ ndị jikọtara anyị n'oge gara aga, ọ na-ahapụ anyị ka anyị gaa n'ihu n'atụghị ụjọ, n'ihi na anyị enweghị ihe funahụrụ anyị. Ihe ọ bụla edozichara ka emegharịrị maka ọmụmụ nke ọdịnihu, ya mere onweghi ihe furu efu, n'agbanyeghị usoro nke uru na ọnwụ.
N'ime oge a Tarot dị, anyị na-ahụ Ọnwụ n’elu ịnyịnya na uwe ojii. Ihe e mesiri ike na mkpuchi ndị a nọ na ntaramahụhụ nke mmehie, dị ka ọ dị n'ụzọ e si mee ihe otiti ihe mgbe ochie (nke ihe oyiyi nke Ọnwụ dabeere na ya) ịkọwa Iwe Chineke. N'ụzọ dị mma, n'oge a, anyị ejighị nkà ihe ọmụma dị otú ahụ na-ebogbu anyị.
Hapu onwe gi site n'oge gara aga nke na-adighizi abara gi uru ma dikwa n'ihu.
Kaadị ọnwụ na-adụ gị ọdụ ikewapụ iwu ochie. I nwere ike mechie akuko, mezue oru ndi a na-emezughi, wee gbute ihe ubi. Oge erugo ka ị gaa n’ihu. Ọ bụrụ na ị bee ụdọ jikọtara gị na ụzọ ochie na mgbakọ oge ochie, ị nwere ike ịhapụ onwe gị isonye na nnabata nke ìhè na-abata. Nke a abụghị ihe ngọpụ iji jụ ndị ọzọ ma ọ bụ mebie ha n'ụzọ ọ bụla. Ọ bụ naanị oge iji kwalite ọdịmma gị.
Ekwela ka agụụ na-agụ gị na ikwesị ntụkwasị obi gbochie gị. Dịrị njikere ime ihe ọ bụla ọ ga-ewe gị ebe ọ bụla ị chọrọ ịbụ.